🥇 ▷ Kaameradda iPhone 11 ayaa la sheegay inay leedahay qaab Pixel-like night ah, laakiin waxaad ku heli kartaa wax la mid ah iPhone-kaaga ✅
Kaameradda iPhone 11 ayaa la sheegay inay leedahay qaab Pixel-like night ah, laakiin waxaad ku heli kartaa wax la mid ah iPhone-kaaga
Jiilka soo socda ee iPhone 11 line of Apple Waxay ku dhamaan kartaa iyagoo u eg kii sanadkii hore ee ‘XS’ iyo kii hore ee ‘iPhone X’, laakiin wali waxay umuuqataa cusboonaysiin weyn. Processor-ka cusub ayaa la filayaa inuu Apple A13 soo bandhigo guulo wax ku ool ah iyo horumar la taaban karo oo wax ku ool ah, taasoo dhalisay in taleefanno aad u dhakhso badan leh ugu yaraan nolosha batariyadeed ee moodooyinka sanadkii la soo dhaafay. Naqshadeynta cusub ee iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max waxay yeelan doonaan dib u eegis aad u wanaagsan, oo leh dhalooyinka muraayadaha barafka iyo isbeddelada kale ee waaweyn. Waxa kale oo jiri doona muuqaalo badan oo cusub oo aad ku raaxeysan karto, sida dib u soo celinta lacag la’aan bilaa lacag ah iyo hab sawir cusub oo kaa qaadaya waxyaabaha ka baxsan xayndaabka, oo kuu oggolaanaya inaad jareyso tallaalladaada markii aad qaadatay. Marka laga hadlayo sawirka, taasi waa meesha horumarka ugu weyn laga yaabo in laga helo.
Mar uun wakhti aan fogayn, Apple Wuxuu ahaa horyaal aan la saadaalin karin oo kaamirooyinka casriga ah iyo farqiga u dhexeeya taleefannada iPhone iyo Android aad ayuu u weynaa. Ka dib, dhawr sano ka hor, Huawei waxay u hibeysay tiro tan ah kheyraad si loo wanaajiyo kamaradaha taleefannadooda casriga ah waxayna ka dhaaftay Apple xaddiga ballaaran. Tan iyo markaas, soosaarayaasha taleefannada kale ee Android waxay sidoo kale dhaafeen Apple, oo ay ku jiraan Google iyo Samsung. Si kastaba ha noqotee, sannadka 2019, Apple wuxuu u muuqdaa inuu raadinayo inuu dib ula noqdo carshiga.
IPhone 11 wuxuu dhabarka dambe ku lahaan doonaa kamarado labalaalka muraayadaha ah, laakiin cusboonaysiinta ugu weyn waxaa laga heli doonaa iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max. Nidaamka muraayadaha muraayadaha gadaalka ah ee ‘triple lens’ gadaal gadaal ah wuxuu ku dari doonaa muraayad balaaran oo ballaaran xagal ballaaran iyo muraayadaha telephoto ee Apple, waxaan sidoo kale rajeyneynaa horumar weyn oo ay suurto galisay barnaamijka kumbuyuutarka cusub ee kamaradaha. Sida ay sheegayaan wararka xanta ah, horumarintaan ayaa waxaa ka mid ah hab cusub oo qaas ah oo qaadi doona sawirro tayo sare leh habeenkii.
Google dhammaanteen wuu naga yaabiyay markii ay soo saartay Night Sight markii ugu horreysay taleefannadeeda casriga ah ee Pixel. Qaabkan cusub ee sawir qaadista ayaa adeegsaday sirdoonka macmal si ay si weyn u wanaajiso cadaynta sawirrada iyadoo iftiinka hooseeya, natiijooyinkuna ay run ahaantii la yaab ahaayeen.
Google’s Night Sight ayaa soo wanaagsanaatay tan iyo markii ugu horreysay ee la soo bandhigay, iyo kuwa kale ee soosaarista taleefannada Android waxay isku dayeen inay raadiyaan xalal la mid ah kan. Habeenki Samsung ma xuma, laakiin wax kale kuma noola ilaa Night Sight. Bisha soo socota, si kastaba ha noqotee, taasi waa is beddeli kartaa.
Waxaa lagu xantaa in Apple Waxay ugu dambeyntii diyaarisay hab cusub oo habeenkeeda ah, waxayna soo saari doontaa natiijooyin cajiib ah markii sawirro lagu qabanayo si hoose. Xaqiiqdii, ogaanshaha Apple, waxay ku dhammaan kartaa inay xitaa ka fiicantahay Google’s Night Sight mode, maadaama Apple ay guud ahaan sugeyso illaa ay ka gaadhayso tayada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ka hor intaan la bilaabin astaamaha cusub.
Faa’iido darrooyinka cusub ee Habeenki hore ee iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max oo laga keenay Apple Waxaa laga yaabaa inay gaar u ahaadaan moodeelada cusub ee iPhone 2019. ‘Google’s Night Sight’ waxaa laga heli karaa taleefannada Pixel-ka duugga ah, laakiin Apple Waxaad go’aansan kartaa inaad haysato dhammaan waxyaabaha cusub ee kamaradaha iPhone 11 oo kali ah si looga caawiyo kor u qaadashada iibsashada iPhone cusub. Iibka IPhone-ka ayaa hoos u dhacay si joogto ah waayadan dambe, sidaa darteed Apple Waxaad ubaahantahay dhamaan caawimaada aad heli karto. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto wax la mid ah oo ku saabsan iPhonekaaga hadda jira, waxaa jira dookhyo xiiso leh oo aad la tashan karto.
Xarig ku saabsan Reddit ayaa u soo jiidatay dareenkeenna codsi loogu magac daray NeuralCam Night Photo, kaas oo loogu talagalay in lagu qurxiyo aragtida Google ee fiidkii iPhone. Waxay u isticmaashaa isla teknolojiyad si ay u iftiimiso sawirrada mugdiga ah, natiijooyinkuna waxay noqon karaan kuwo aad u cajiib badan. Waxaan tijaabinay dalabka nafsadeena, waana tan tusaalaha tusaalaha ah ee uu daabacay qofka bilaabay taxanehaan Reddit:
Waa tan tusaala kale oo ah xarig kaladuwan Reddit:
Codsi kale oo ku xusan taxanaha koowaad waa NightCap Camera, waxaana loo sheegay inuu gaaro natiijooyin la mid ah. Labada dalabba waxay ku kacayeen $ 2.99 dukaanka barnaamijka ‘iOS’ ee Apple, kaas oo aan haba yaraatee wax xun ahayn. Taxanaha cusub ee iPhone 11 ee Appleundoub, waxaad ku guuleysan doontaa natiijooyin aad ufiican iyadoo la adeegsanayo sirdoon aad u horumarsan oo ku takhasusaya awoodda buuxda ee isuduwaha Apple, laakiin sidoo kale waxay ku kici doontaa wax ka badan $ 2.99 marka ay bilaabato bisha soo socota ee Sebtember 20.
Maqaalka cusboonaysiinta oo leh muunad labaad oo sawirrada NeuralCam ah.